ဗလပြန် - ဝီကီပီးဒီးယား
ဒေါ်ဗလပြန်သည် စံတော်ချိန်အကကို တီထွင်ခဲ့သူ အကဝိဇ္ဇာ မင်းသမီးကြီးဖြစ်သည်။ တစ်ခေတ်တစ်ခါက နာမည်ကျော်ခဲ့သူ ယောက်ျားမင်းသမီး မယ်အောင်ဗလ ဝင်စားသည်ဟု ယုံကြည်ကြသည်။
(1914-06-27)ဇွန် ၂၇၊ ၁၉၁၄
ပဲခူးမြို့နယ်၊ ပဲခူးတိုင်း၊ မြန်မာ
၁၉၈၇ (အသက် ၇၂–၇၃)
၅ အောင်ဗလနှင့် ရေစက်
ကရင်အမည် စောနန်းရွှေ ဖြစ်၍ ဗမာအမည်မှာ မစိမ်းမြ ဖြစ်သည်။ ၁၉၁၄ ခု၊ ဇွန်လ ၂၄ ရက်၌ ပဲခူးတိုင်း၊ ပဲခူးမြို့နယ်၊ ထုံးကြီးကျေးရွာအုပ်စု၊ ရေအေးစမ်းရွာတွင် အဖ ဦးချမ်းအေးနှင့် အမိ နော်ရွှေမိတို့က ဖွားမြင်သည်။ အဆိုအက ဝါသနာပါသည်ဖြစ်၍ မန္တလေးမှ မြေဝိုင်းမင်းသား ဦးရွှေဂုံ၊ ဇာတ်ဆရာ ဦးဘမောင်နှင့် ဇနီး ဒေါ်ဇော်ပျံတို့ထံတွင် ပညာသင်ယူခဲ့သည်။
အသက် ၁၆ နှစ်အရွယ်တွင် မင်းသား ဘားမားစိန်၊ နေပြည်တော် ဘသက်တို့နှင့် စတင် တွဲဖက်ကပြခဲ့သည်။ စန္ဒရားဦးဘအုန်း၊ ဆရာလတ်၊ ဒုတိယဘိုးစိန်၊ အောင်ဘညိုတို့နှင့် နှစ်နှစ်စီ ကပြခဲ့ပြီး၊ တလိုင်းညီနောင်နှင့် သုံးနှစ် ကပြခဲ့သည်။ ရွှေမန်းတင်မောင်နှင့်မူ ဂျပန်ခေတ်က တစ်ခဏမျှသာ တွဲကခဲ့ဖူးသည်ဟူ၏။ အထင်ရှားဆုံး တွဲဖက်မှာ ၁၀ နှစ်ခန့် တွဲခဲ့သည့် စိန်အောင်မင်းနှင့် ခုနစ်နှစ်ခန့်တွဲခဲ့သည့် အောင်မောင်းတို့ ဖြစ်သည်။ မင်းသား အောင်မောင်းမှာ ပညာအထက်ဆုံးဟု ဆိုသည်။ သီပေါဟော်၌ ဘိုကေစိန်နှင့် တွဲဖက်၍ ရှမ်းအိုးစည်နှင့် ကိန္နရာအက တင်ဆက်ခဲ့ရာ၊ စော်ဘွား စဝ်အုံကြာက ငွေဓားနှစ်လက်၊ ငွေဖလားနှစ်ခွက် ဆုချသည်။ အိမ်စောင့်အစိုးရလက်ထက် တပ်မတော်ကပွဲရုံတွင် ရုပ်သေးနှင့် လူ အပြိုင်ကသည့် အကကို စတင်မိတ်ဆက်ခဲ့ရာ ဗိုလ်မှူးကြီးထွန်းစိန်က ဂုဏ်ထူးဆောင် ရွှေတံဆိပ်နှင့် အကဝိဇ္ဇာဘွဲ့တို့ ချီးမြှင့်ခဲ့သည်။ ၁၉၆၉–၇၀ တွင် မင်းသားစိန်အောင်မင်းနှင့် တွဲဖက်ကာ စံတော်ချိန်အကကို တီထွင်ကပြခဲ့သည်။
ပန်တျာကြည်လင်နှင့် နောက်ဆုံး တွဲဖက်ကပြပြီးနောက်၊ ယဉ်ကျေးမှုဦးစီးဌာနတွင် နည်းပြအဖြစ် တာဝန်ထမ်းဆောင်ရင်း ယိမ်းအဆင့်အတန်း မြင့်လာအောင် စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့သည်။ ကိန္နရာယိမ်းတွင် ငှက်ညည်းကို ကိုယ်တိုင်သီဆိုခဲ့သည်။ ရွှေမန်းတင်မောင်၊ စိန်အောင်မင်း၊ မြကလေးတို့နှင့်အတူ တရုတ်၊ ဗီယက်နမ်နိုင်ငံများသို့ ယဉ်ကျေးမှုဖလှယ်ရေး အစီအစဉ်များဖြင့် သွားရောက်ခဲ့သည်။
၁၉၈၇ ခုနှစ်တွင် ရန်ကုန်မြို့၌ အနိစ္စရောက်သည်။
စိန်အောင်မင်းနှင့် နာမည်အကြီးဆုံး တွဲဖက်တင်ဆက်မှုများမှာ ငမိုးရိပ်၊ ရာဇသင်္ကြံ၊ မင်းညီနောင်၊ မောင်မစ္စက၊ ဝိဇယကုမ္မာဇာတ်တို့ဖြစ်သည်။ အောင်မောင်းနှင့်မူ မဟာပဒုမ၊ ပန်းပဲမောင်တင့်တယ်၊ တာနောယက္ခ၊ သုဓနုမေဓာဝီဇာတ်တို့မှာ ထင်ရှားသည်။ မင်းကုသ၊ ပဋိက္ခရား၊ ဥဒါရီကုမာရီတို့ကိုလည်း ကပြခဲ့သေးသည်။
အောင်ဗလ ပဲခူး၌ကစဉ် မိဘများနှင့် ရင်းနှီးခဲ့သည်။ သားဖြစ်သူ ရွှေဇံကို အောင်ဗလက မွေးစားပြီး ရှင်ပြုပေးလိုသည် ဆိုခဲ့သည်။ သို့သော် အထမမြောက်ခင် ကွယ်လွန်သွားရာ၊ သမီးအဖြစ် ပြန်ဝင်စားခဲ့သည်ဟု ဆိုကြသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ညင်း (စော)၊ မုံ (August 2007)။ မြန်မာအမျိုးသမီး (3rd ed.)။ Seikku Cho Cho။ pp. 87–92။
↑ ၂.၀ ၂.၁ "ယောက်ျားမင်းသမီး မယ်အောင်ဗလ" (in my)၊ BBC News မြန်မာ။
↑ ၃.၀ ၃.၁ ၃.၂ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း နှစ်ချုပ်။ စာပေဗိမာန်။ 1988။
↑ တင် (ဦး)၊ မောင်မောင် (1971)။ ပြဇာတ်နှင့်ပြဇာတ်စာပေ: ပြဇာတ်နှင့် ပြဇာတ်နှီးနှောဖလှယ်ပွဲတွင် တင်သွင်းခဲ့သောစာတမ်းများ၊ ဆွေးနွေးချက်များနှင့် အစီရင်ခံစာ။ စာပေဗိမာန်။
↑ မြန်မာ့ဇာတ်သဘင်တခေတ် ပြောင်းလဲရေး။ မြန်မာ့ဆိုရှယ်လစ်လမ်းစဉ်ပါတီ ဗဟိုကော်မတီ ဌာနချုပ်။ 1983။
↑ သွန်း (မောင်)၊ ခေတ် (1995)။ သက်တန့်ရောင် နှင်းဆီပန်းခင်း။ ပွင့်ဇာဖြူစာပေ။
↑ ညင်း (စော.)၊ မုံ (2005)။ စောမုံညင်း၏ စောမုံညင်း။ နိုင်ငံ့ဂုဏ်ရည် စာပေတိုက်။
↑ မြန်မာ့စွယ်စုံကျမ်း။ မြန်မာနိုင်ငံ ဘာသာပြန်စာပေအသင်း။ 1954။
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ဗလပြန်&oldid=670519" မှ ရယူရန်
၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၆:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး တည်းဖြတ်ခဲ့သည်။
ဤစာမျက်နှာကို ၁၂ ဩဂုတ် ၂၀၂၁၊ ၁၆:၁၂ အချိန်တွင် နောက်ဆုံး ပြင်ဆင်ခဲ့သည်။